January 2, 2015 – democracy for burma
On January 2, 2015 January 3, 2015 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
!! #CLIP #MYANMAR #BURMA #ရုံးချိန်းအပြီး #ရဲဘော်ဝေဠုပြည်သူသို့ #ပန်ကြာချက။်
On January 2, 2015 January 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရုံးချိန်းအပြီး ရဲဘော်ဝေဠုပြည်သူသို့ ပန်ကြာချက။် CR. Naing Lay Htwe
မိကျောင်းကန် ဆန္ဒပြသူများ အရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသူ ကုိုဝေဠု ကို ကျောက်တံတား တရားရုံးမှာ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက်နေ့က စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ ခ ဖြင့်တရားစွဲဆုို ထားပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ရုံးပြန်ချိန်း ထားပါတယ်။
၅၀၅/ခ ဆိုတာက ရဲဘော်ဝေဠုအတွက်အခြေအမြစ်မရှိဘဲ စွပ်စွဲရုံးတင်ခံရတာမို့ရယ်နေပေမယ့်
သူ့ အတွကတရားမျှတမှု့ တော့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
ဒီစစ်ဗျူရိုကရက် အစိုးရယန္တယားဆက်လက်ရှင်သန်လည်ပါတ်ခွင့်ရနေသရွေ့ ဒုတိယ ရဲဘော်ဝေဠုတွေ ၊တတိယရဲဘော်ဝေဠုတွေအများကြီးထောင်နံရံတွေနောက်ရောက်နေရဦးမှာပါ။
စစ်ဗျူရိုကရက်စနစ်ကို ပြောင်းလဲဘို့ စနစ်ပြောင်းတိုက်ပွဲကိုတဆင့်မြှင့်တင်ကြပါစို့ ။
ကိုဝေ ဠု အားရုံးထုတ်လာစဉ်
photo Kyaw Lwin
On January 2, 2015 January 6, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
အားရ ပါးရ အော်ဟစ်နေသည် ။ Continue reading “#update #အနာဂါတ် တိုင်းပြည် သာယာလှပဖို့ မုန်းသင့်သူကို #မုန်းပါသည်။ ပယ်သင့်သူကို ပယ်ပါသည်။” →